बाबाको उमेरको मान्छेसंग म कसरी विहे गर्छु भन्ने शिल्पाको किन मन बदलिएर अहिले छवि ओझासंग विहेको लागि तयार छिन त - Arghakhanchi Saptahik
बाबाको उमेरको मान्छेसंग म कसरी विहे गर्छु भन्ने शिल्पाको किन मन बदलिएर अहिले छवि ओझासंग विहेको लागि तयार छिन त
हिरोइन शिल्पा पोखरेलले दुई वर्षअगाडि रुन्चे स्वरमा मिडियासामु भनेकी थिइन्, ‘छविराज ओझासँगको अफेयरको हल्लाले निकै तनावमा छु । परिवार र आफन्तको गाली खानुपरेको छ । बुबा उमेरको मान्छेसँग कसरी अफेयर हुन्छ ?’ यसरी दु:ख पोखेपछि शिल्पाप्रति सान्त्वना बढ्यो । तर, यसबीचमा उनको भावनामा
के बदलाव आएछ कुन्नि, सार्वजनिकरुपमै छविले विवाहको प्रस्ताव राखे, आफू सकारात्मक रहेको भन्न थालिन् मुस्कुराउँदै ।
छविले त पहिलेदेखि नै शिल्पालाई पत्नी बनाउन आतुर रहेको बताइरहेका नै हुन् । दुवैले हरियो झन्डा देखाएपछि मसला बनिहाल्यो, समाचारमा छाएको छायै । दसैँको पूर्वसन्ध्याको तमासा हो यो, जतिबेला छवि निर्मित र शिल्पा अभिनीत किस्मत २ रिलिजको सँघारमा थियो । प्रमोसनको मूल माध्यम नै प्रेम र विवाहको किस्सा बन्यो/बनाइयो । जब कि, भदौको मध्यसम्म पनि शिल्पा यस सम्बन्धका बारेमा हिचकिचाएझैँ गर्थिन् । हलबाट फिल्म उत्रिएसँगै लगनगाँठो कस्ने प्रसंग सेलाउँदै गएको छ । फोकटमा फिल्मको प्रचार गर्नकै लागि उनीहरूले अफेयरको हल्ला पिँmजाएको प्रमाणित भएको छ ।
आफ्नो र छविको प्रेमसम्बन्धको हल्लाले लज्जा हिट भएको शिल्पा हाकाहाकी स्वीकार्छिन् । भन्छिन्, “छविको गर्लफ्रेन्ड कस्ती रहिछिन् भनेर हेर्न पनि हलमा दर्शकको ओइरो लाग्यो ।” यस्तै रवैया नियालिरहेका निर्देशक नवीन सुब्बाले जेठ तेस्रो साता राजधानीमा
आयोजित एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘अझै पनि फिल्म कसरी राम्रो बनाउनेभन्दा
कस्ता फन्डाले फिल्म चल्छ भन्नेतिर निर्माताको ध्यान हुन्छ ।’
पहिलो साता हिरोइन प्रियंका कार्कीले फेसबुकमा बडो मनछुने स्ट्याटस पोस्ट गरिन्, ‘जब–जब म नयाँ फोटो हाल्छु, नयाँ फिल्मको गीत या म्युजिक भिडियो सेयर गर्छु, किन यति धेरै गाली गर्नुहुन्छ ? …भालु, वेश्याजस्ता शब्द प्रयोग गरेर आनन्द महसुस गर्नुहुन्छ ?’ आफूलाई तथानाम गाली गर्ने फेसबुक प्रयोगकर्तालाई लक्षित गर्दै उनले अगाडि लेखेकी छन्, ‘ तपाईंका छोरी–चेलीमाथि कसैले यस्तै कमेन्ट गर्‍यो भने तपार्इंको मन कति दुख्छ होला ?’ यस मार्मिक स्ट्याटसलाई मूलधारका मिडियाले समेत समाचार बनाए । एकखालको ‘सेन्टिमेन्ट’ बटुलिन् । तर, ‘टाइमिङ’चाहिँ उनको नयाँ फिल्म हाउ फन्नी प्रदर्शनको केही दिनअघिको थियो । यही फिल्म युनिटका एक सदस्यको दाबी पत्याउने हो भने हाउ फन्नीको प्रचारमा सघाउने उद्देश्यले सरसल्लाह गरेरै फेसबुकमा पोखिएकी थिइन् प्रियंका ।
फिल्मी दुनियाँमा एउटा शब्द सर्वथा चर्चामा हुन्छ, फन्डा । भिन्न प्रकृतिका भए पनि माथिका दुवै घटना फन्डा नै हुन् । जसको नियत हुन्छ, जसरी होस् चर्चाकै वरपर रहने । खास गरी फिल्म प्रदर्शनताका र आफू ओझेलमा परेका बेला यस्ता हत्कन्डा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति धेरै हुन्छ । यसका लागि सेलिब्रिटीहरू अन्त्यन्त निजी मामलालाई हतियार बनाउन पनि हिचकिचाउँदैनन् । जस्तो : शिल्पा र छविले गरे । तर, यो जोडी र प्रियंका मात्र होइन, अधिकांश फिल्मकर्मी विवादास्पद हर्कतमा रमाउँछन् । रंगीन संसारमा रुमल्लिरहेकाहरूलाई जहिल्यै छाइरहने लत लाग्ने मत
छ निर्देशक कुमार भट्टराईको । पटकथाकारसमेत रहेका भट्टराई भन्छन्, “ग्ल्यामर फिल्डमा लागेका मध्ये अधिकांश जसरी भए पनि समाचारमा छाइरहनुपर्छ भन्ने चिन्तनबाट ग्रस्त हुन्छन् । त्यसैले हावादारी झगडा गरेर होस् वा लभ–अफेयरको अफवाह फैलाएर, सधैँ आममानिसको मानसपटलमा रहन खोज्छन् ।”
प्रेम र लफडाको सहारा
सामान्य आनीबानी पनि जनमानसमा चासोको विषय बन्छ । झन् मायाप्रीति र झगडा त
हटकेक हुने भइहाल्यो । त्यसैले कलाकारहरू कहिले असली प्रेम र झगडालाई प्रचारको माध्यम बनाउँछन्, त कहिले प्रचारकै लागि यस्ता नाटक गर्छन् । यस्ता कैयौँ उदाहरण छन् । नीता ढुंगाना र आमेश भण्डारीको लभ र ब्रेकअप ज्वलन्त नमुना हो । भूलभूलैयाको पत्रकार सम्मेलनमा आमेशले नीतालाई चुम्बन गरे, फेसबुकमा नीताले आमेशलाई ‘माई लभ’ भनेर चिनाइन्, फिल्म फूलैफूलको मौसम
तिमीलाई रिलिजको पूर्वसन्ध्यामा । रिल जोडीको रियलमा पनि रोमान्स भएपछि चर्चा नहोस् कसरी ! जति प्रदर्शन मिति नजिकिन्थ्यो, फेसबुकमा उनीहरूको प्रेम उत्ति नै छताछुल्ल हुन्थ्यो । दुर्भाग्य ! फिल्म फ्लप भइदियो । उनीहरूको प्रेम पनि तुहियो । साँच्चै प्रेम थियो वा नाटक मात्रै, उनीहरू नै
जानून् । तर, प्रेमलाई प्रयोग गरेर नि:शुल्क चर्चाचाहिँ कमाएकै हुन् ।
रिलिजताका अनमोल र आनाको अफेयरको हल्ला चलेको थियो, पछि सेलायो । संयम पुरी र आश्मा डीसीको प्रेम उत्तिकै हटकेक बनेको थियो, आभास प्रदर्शन हुने बेला । पछि उनीहरू छुट्टिएको खबर बाहिरियो । लभसब रिलिजका दौरान सलोन बस्नेतलाई करिश्मा श्रेष्ठ ‘मेरी प्रेमिका होइनन्’ भन्दैमा फुर्सद भएन तर उनले जति होइन भन्थे, उति गसिप बन्न थाले । फिल्मको पनि प्रचार भयो, उनीहरूको पनि ।
रामप्यारी प्रदर्शनको वरपर सुदर्शन गौतम र रेखा थापाको प्रेम फेसबुकमै पोखिएको थियो । यसले फिल्मप्रतिको चासो र प्रचार तेज
बनायो । रेखा र आर्यन सिग्देलको दुस्मनीको खबरले दुवैलाई चर्चामा ल्याइरहन्थ्यो बेलाबखत । चंखे शंखे पंखे र अझै पनिमा एकसाथ अभिनय गरेका सुदर्शन थापा र पूजा शर्मा पनि प्रेम सम्बन्धका कारण चर्चामा आइरहन्छन् । आर्यन र सुदर्शनको शत्रुता पनि बरोबर बाहिरिन्छ ।
माछाले स्तन छोपेर सस्तो चर्चा बटुलेकी शुभेच्छा थापाले आफ्नै फिल्मकी हिरोइन क्षितिजा शाक्यसँग झगडा परेको नाटक गरिन्, मिस नेपालको प्रमोसनका दौरान । जिस्म रिलिज हुने बेला अर्चना पनेरुसँगको पंगा, राजु गिरीसँग कहिले सामीप्य र कहिले टकराव र संवेदनशील अंग खादाले छोपेर शुभेच्छा मिडियामा छाइरहने प्रयासमा हुन्छिन् । चपली हाइटको पोस्टरमा फोटोसपको प्रयोग गरेर पछाडिबाट आफूलाई नंग्याएको भन्दै हिरोइन विनीता बरालले बखेडा गरिन् । यता, फिल्म हिट
भयो, उता निर्माता अर्जुनकुमार र उनीबीच शत्रुता बढ्यो । त्यसअगाडि विनीताले के म तिम्रो साथी बन्न सक्छुबाट आफू निकालिएपछि ‘आत्महत्या गर्छु’
भन्दै मिडियाको ध्यान तान्ने प्रयास गरेकी थिइन् । यसो हँुदा फिल्म नखेल्दै फोकटमै उनले प्रचार पाइन् ।